The Ab Presents Nepal » ग्लोबल टी–२० मा सोमपाल र सन्दीपको कमजोर प्रदर्शन !
ग्लोबल टी–२० मा सोमपाल र सन्दीपको कमजोर प्रदर्शन !
क्यानडामा जारी ग्लोबल टी–२० मा नेपालका बलरहरू सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछाने दुवैले कमजोर प्रदर्शन गरेका छन् । विनिपेग हक्सबाट डेब्यु खेल खेलेका सोमपालले एड्मन्टन रोयल्ससँगको डेब्युमा कमजोर खेल कौशल प्रस्तुत गरे ।
सोमपालले दुई ओभर बलिङ गर्दै ३३ रन दिए । उनले कुनै विकेट लिन सकेनन् । एक सय ९६ रनको विशाल लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको एड्मन्टनले खेल ८ विकेटले जित्यो । पहिलो ब्याटिङ गर्दै विनिपेगले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९५ रन बनाएको थियो । सोमपालले ब्याटिङमा पनि राम्रो गरेनन् । ८औं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न गएका उनले ५ बल खेलेर एक रनमात्र बनाए ।
सन्दीपले पनि टोरन्टो नेसनल्सबाट राम्रो खेल्न सकेनन् । ब्राम्प्टोन वल्भ्सविरुद्धको खेलमा पूरा ४ ओभर बलिङ गरेका उनले एक विकेट लिएर ४४ रन दिए ।
पहिले ब्याटिङ गरेको ब्राम्प्टोनले २० ओभर खेल्दै ६ विकेटको क्षतिमा २२२ रनको विशाल स्कोर बनाएको थियो । २२३ रनको लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा उत्रिएको टोरन्टो नेसनल्सले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २११ रनमात्र बनायो । म्याच टोरन्टोले ११ रनले जित्यो ।